hip hop show မှာ အရမ်းလန်းနေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » hip hop show မှာ အရမ်းလန်းနေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
hip hop show မှာ အရမ်းလန်းနေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
Posted by နွယ်ပင် on Sep 28, 2010 in Celebrity, Entertainment, Style & Beauty | 11 comments
မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ မော်ဒယ်တွေရဲ့ ၀တ်ပုံစားပုံကိုအတုယူပြီး လိုက်ဝတ်ကြတော့အ ခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့လည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် သံသယဖြစ်မိတယ် ။ တဖြည်းဖြည်းအတိုအပြတ်တွေဝတ်လာပြီး …အမိုက်မှောင်တွေဖုံးလာတော့တာပဲ ။ နောက်ပိုင်း ဆိုက်ကားသမားကတောင် ကိုယ့်အ၀တ်စားအနေထိုင်ကြောင့်လေးစားမှာမဟုတ်တော့တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တောင် အတိုအပြတ်တွေမြင်ရင် ဘာကဘာဆိုတာမခွဲတတ်တော့ဘူး
အားလုံးကို အတူတူပဲထင်နေတာ စင်တင်ကလား KTV ကလားဆိုပြီး ၀တ်တဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တော်တော်လှတယ်ထင်နေမှာ
ဘာပဲပြောပြော အရာရာထိမ်းသိမ်းရမှာ ဒို့ ယောင်္ကျားတွေဘဲ
ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိလို ၀တ်ကြတာနေမှာပေါ့ဗျာ … ရာသီဥတုနဲ့လည်း လိုက်တယ်လေ … ရုပ်မရှိတော့ ပါတာလေးတွေနဲ့ပဲ ရုပ်စားကြရတာပေါ့ …. တိုလေကြိုက်လေ … နောက်ဆိုရင် ဘာမှမပါပဲ ဖျော်ဖြေဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ် … အားပေးနော် ….
ဒို့မြန်မာမလေးတွေက အမြင်ပိုရှိတယ်..သူများနိုင်ငံက ဒူးအထက်ဝတ်ပြီဆိုတာနဲ့…မြန်မာမလေးတွေက ဒူးအထက်ရဲ့ အထက်ရောက်အောင်ကို ၀တ်ပစ်လိုက်ကြတာပဲ။လိုက်မမီနိုင်လောက်အောင်ကိုပါပဲ…အခုဆို အ၀တ်အထည်ဆိုင်တွေမှာ…အရှည်ဝတ်ချင်ရင် တောင် ရှာရတာမလွယ်တော့ဘူး။
ခောတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ အတွေးတွေပါပဲ ။ တောကိုပြန်လိုက်ပါတော့ ….
အဲလိုဝတ်တာကို..ခေတ်ရှေ့ပြေးတယ် ခေတ်မှီတယ်လို့ ယူဆနေကြတာမကောင်းဘူးဗျာ…..
ကျနော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောသွားတဲ့စကားက တစ်ဖြေးဖြေးမှန်လာပါပြီကော..
အဲလိုနိမ့်ကျတဲ့အတွေးနဲ့ လူတွေ များလာရင် မြန်မာနိုင်ငံ ဖာနိုင်ငံဖြစ်သွားဖို့ ပိုနီးလာသလိုခံစားရတယ်…
ကျနော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံသား မြန်မာလူမျိုးတွေပါ… မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်..မြန်မာလူမျိုးတွေ သိသင့်တာတွေသိဖို့အတွက်..
ဒီဆိုဒ်မှာ…၀င်ပြီးရေးနေ ဖတ်နေကြတဲ့သူတွေပါ… အပေါ်က ညီလေးတစ်ယောက် comment ပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးအတွေးမျိုးနဲ့ ဒီဆိုဒ်ထဲကလူတွေကို ဝေဖန်တာတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ အမြင်မတော်လို့ဝင်ပြောတာပါ ထိခိုက်ရင်ခွင့်လွှတ်ကြပါ
ae lout wit tar ka taw. ma htoo san bu lo. htin par tal. awit asar htat sate ka po ayae kyi par tal.bal yout kyar lay ma ae lo ma wit tar kol. takal lo. wit yin lite wit kya ohn mar pal.time and situation paw. naing ngan yae amyin nae pal ma pyaw kya par nae
ဘောင်းဘီတို တစ်ထည် တစ်ထွာလောက်ကို တစ်သောင်းနှစ်ထောင် ရှိတယ် … တိုလေ ဈေးကြီးလေပဲ … အရှည်တစ်ထည်ဝယ်ပြီး သုံးထည်လောက်ပြန်ချုပ် ၀တ်လိုက်တော့မယ် … ဟီးဟီး